Midowga Yurub iyo UN-HABITAT oo Sharaxay Saameynta Mashruuca SECIL ee Muqdisho – Radio Muqdisho
Midowga Yurub iyo UN-HABITAT ayaa soo gabagabeeyey mashruuca SECIL oo abuuray shaqooyin iyo adeegyada hoose ee dadka deegaanka Muqdisho saddexdii sano iyo barkii la soo dhaafay,iyadoo lagu bixiyey lacag dhan 3.5 Milyan oo EURO.
Midowga Yurub iyo UN-HABITAT oo fulinaysay Mashruucan ayaa waxey dayactireen suuqyo muhiim ah, nidaamka ururinta khashin khaadka oo la aas aasay, waxaa sare loo qaaday shuruucda iyo xirfadaha waaxda dhismaha, waxaa la sameeyey sheybaarro lagu baaro tayada biyaha iyo tayada qalabka dhismaha, waxaa sare loo qaaday helitaanka biyo nadiif ah, waxaana la aas aasay Xarunta Farsamadda Tababarada,iyadoo sidoo kale la abuuray fursado qiimo badan oo shaqo abuuris iyo hab-nololeedka kooxaha bulshada ee ku shaqeeya habab qiimo jaban oo wax soo saar leh.
“Mashruuca SECIL wuxuu guul weyn u yahay caasimadda Soomaaliya, Sidaa waxaa yiri Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Michele Cervone d’Urso,wuxuuna is bedel muuqda ku sameeyey nolosha dadka degan Muqdisho maalin kasta,isagoo bixiyay biyo nadiif ah, deegaan nadiif ah iyo shaqooyin badan. Taasina waa waxay Soomalidu rabaan.
Mashruuca, “Joogteynta Shaqo-abuurka iyo Sare u qaadista Hab-nololeedka dadka jilicsan ee Magaalada Muqdisho (SECIL)” wuxuu si dhow ula shaqeeyey Maamulka Gobolka Banaadir (BRA) si loo hubiyo joogteynta howlaha mashruucan.
Midowga Yurub,UN-Habitat iyo Maamulka Gobolka ayaa waxey sharaxeen habka gaarka ah ee mashruuca SECIL waxeyna sidoo kale amaaneen muuqaalka horumarkiisa,iyagoo ku nuux nuuxsaday taageerada buuxda ee ay u hayaan Dowladda Hoose sidii ay ula wareegi lahayd una joogteyn lahayd howlaha mashruucan ee mustaqbalka.
Tartan Sports oo maanta lagu qabtay degmada Xamarweyne “Sawirro”
Tartan Sports oo maanta lagu qabtay degmada Xamarweyne "Sawirro"